Zimbabwe neGhana Dzodaidza Vatambi Vane Mukurumbira kuMutambo weWorld Cup 2022
Gumiguru 04, 2021
Vamwe vatambi vechikwata chemaWarriors vari kutanga kusvika muGhana nhasi kugadzirira mutambo wavo we 2022 World Cup nemaBlack Stars uyo iriko neMugovera.
Maneja wemaWarriors VaWellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti kaputeni wechikwata ichi Knowledge Musona nevamwe vari kusvika muGhana neMuvhuro.
VaMpandare vanoti ivo nevarairidzi Norman Mapeza, Taurayi Mangwiro naMandla Mpofu, pamwe nemutambi Marshall Munetsi uyo anotambira kuFrance asi ari muHarare vari kusimuka nemusi weChipiri
Mutambi achapedzisira kupinda mukamba ndiTeenage Hadebe anotambira Houston Dynamo kuAmereka, uyo achabatana nevamwe neChina. Mutambo uyu wauya panguva iyo vamwe vatambi vemaWarriors varikubaka moto kuzvikwata zvavo.
Musona akakanda chibodzwa apo Al Tai yakarova Taawoun 2-1 muSaudi Pro League, kuBritain, Brendon Galloway achinwisawo apo Plymouth yakaita mangange 2-2 neLincoln City.
MuAbsa League kuSouth Africa, Knox Mutizwa haana kuda kusarira ndokunwisawo apo Golden Arrows yakarova Marumo Giants 3-1. Mutambi Divine Lunga ndiye akadomwa semutambi akakunda vese apo Mamelodi Sundowns yakarova Swallows 3-0 nezuro.
Tisingakanganwe Jordan Zemura uyo akatamba mutambo wese apo Bournemouth yakarova Sheffield United 2-1 muEnglish Footbal League Championship .
Aimbove murairidzi wemaYoung Warriors Lloyd Chigove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha. Nenhoroondo iyi Chigove anoti ane chivimbo kuti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mubati wepagedhe wemaWarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira. Ghana seZimbabwe yakadzingawo murairidzi wayo Charles Akonnor ndokudoma Milovan Rajevac wekuSerbia.
Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Paryey, Arsenal, Jordan Ayew Crystal palace na Mohammed Kudus Ajax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu.
Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoindi imwechete kubva mumitambo miviri.
South Africa ndiyo irikutungamira gungano iri nemapoinzi mana, ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoinzi matatu.
Chikwata chimwechete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya.